Anti-cellulite fitsaboana - famenoana cellulite ao an-trano, resipe
Anti-cellulite fofona - ny fomba tsara sy ny fomba tsara indrindra
Ao amin'ny ady amin'ny lipodystrophy na "crust orange", ny vehivavy dia mampiasa ny fitaovana rehetra misy. Anti-cellulite "manilikilika" dia iray amin'ireo fomba amam-panao malaza indrindra, na ao an-trano na any amin'ny trano fidiovana tsara tarehy. Manamafy ny manam-pahaizana fa ny voka-dratsiny amin'ny lipodystrophy dia voatsinjara, fa ity fanodinana ity dia tsy ilaina afa-tsy amin'ny hoditra ihany.
Manampy amin'ny selulit ve ny fametahana?
Ny tsy fahampiana kosmetika voalaza dia ny toetry ny vatan'ny vehivavy, vokatry ny hormonal background sy ny rafitry ny vatan'ny sela, noho izany ny "crust orange" dia tsy aretina na tsy fahampian-tsakafo. Azonao atao ny manamboatra ny hoditra ary manala ny fanoherana ankehitriny, fa mba hahatratrarana tanjona toy izany, dia misy fepetra maromaro ilaina. Raha tsy miorim-paka ny vatany, ny fanafody manokana sy ny fikolokoloana ara-batana, ny fifindrana amin'ny cellulite dia tsy hanampy.
Ny fototry ny fomba fiasa dia ny mamorona ny fiantraikany amin'ny sona fohy. Eo amin'ny hoditra dia misy fanafody anti-cellulite mahamay na mahasalama ary mikopaka amin'ny sarimihetsika (sakafo na kosmetika). Vokatr'izany, ny fifanakalozan-drivotra dia mikorontana mandritra ny fe-potoana maromaro, ka noho izany dia manomboka miasa bebe kokoa ny herin'ny hafanana ao amin'ireo faritra voatsabo.
Ny fihenan-keloka manohitra ny selululita dia miteraka fihenana ny fandroahana rano amin'ny tavy marefo. Ity fantsona ity dia manaisotra ny fahamendrehana, saingy tsy manasaraka ny fametrahana fatim-barotra izay miorina eo amin'ny sarangan'aretina. Ny fihenan'ny volavolam-panafody haingana dia haingana noho ny fanamafisana ny fahamendrehana. Aorian'ny ora vitsivitsy dia haverina amin'ny laoniny ny rano, ary hiverina ny 1-2 cm.
Anti-cellulite "manilikilika" dia mahasoa noho ireto zavatra manaraka ireto:
fanentanana ny fifindran'ny ra eo an-toerana;
Famafazana, fanalefahana, fisiahana, fanadiovana lalina ary ny fihinanana sakafo hoditra (arakaraka ny fampiasana azy);
mampitombo ny tonony sy ny elasticité avy amin'ny epidermis.
Wrap-up from cellulite - contraindications
Ny vokatra atolotra dia miteraka fahalemena, indrindra raha ny volo mangatsiaka no atao, fa indraindray dia ilaina ny mandà na mamafa ny fanodinana kosmetika aza. Tsy afaka manao fako amin'ny cellulite ianao amin'ny tranga toy izany:
fisian'ny ratra, hoditra, fery ary fery;
ny aretina mampihorohoro amin'ny atidoha;
fanolokoloana amin'ny fanehoan-kevitra mahazatra;
aretina amin'ny rafi-pandehan'ny kardia;
Ny aretim-pitaovana gnolojika (raha fehezina ho an'ny taovam-pananahana, ny sisiny sy ny rambony);
varikose veins ;
aretina endocrine mitaiza (hypothyroidism, diabetes mellitus);
Ireo fivoriana Professional dia manampy amin'ny fanatanterahana ny vokatra haingana indrindra, satria manam-pahaizana manokana matihanina manatsara tarehy tsara tarehy amin'ny alalan'ny singa miavaka. Ny singa mahomby avy amin'ny cellulite dia sokajina ho 2 vondrona lehibe araka ny toetoetran'ny hetsika:
Tena mangatsiaka. Ny faritra voan'ny aretina dia voadona amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana ara-pahasalamana (hatramin'ny 22 degre). Ny fomba fanodikodinam-bola toy izany dia fomba tsara indrindra ho an'ny vehivavy manana aretim-po sy aretim-po. Ny "swaddling" kilaometatra anti-cellulite dia vahana amin'ny trombophlebitis, vina varikose, hypertension sy ny sela hafa.
Hot. Ny hoditra dia mihatra amin'ny 45-50 degre. Ny akorandriaka anti-cellulite dia miteraka vokatra mafana ary manatsara ny fatran'ny ra. Ny fanodikodinana dia mampihetsika ny asan'ny hodi-doha, mampitombo ny famoahana ny ratra avy amin'ny tavy marefo ary miady amin'ny fahantrana mihamitombo.
Mangatsiaka mangatsiaka avy amin'ny cellulite
Ireo salonona dia manolotra karazana varimbazaha mifototra amin'ny voajanahary voajanahary - algoma, felam-boninkazo mangidy, echinacea, tanimanga sy zavatra hafa. Ny fako tsara indrindra amin'ny cellulite mangatsiaka dia novokarin'ireto marika manaraka ireto:
Hotarafana amin'ny cellulite
Mba hampitombo ny fandehan'ny rà sy ny fampiasana ny lymph, ny kosôma dia ampiasaina arakaraka ny kakao, Asiana centella, ginseng, salady Dead sy ny zavatra hafa voajanahary. Ny akora mahomby indrindra avy amin'ny cellulite miaraka amin'ny asa mafana:
Vatana mangotraka ao an-trano
Ny fanodinkodinana dia tsy mitaky fahaiza-manao manokana sy fahaiza-manao manokana, ny fifangaroan'ny matihanina dia mety hosoloina amin'ny fomba mahomby. Noho ny fahatsoram-po sy ny fahazoana midadasika dia maro ny vehivavy manao firaisana tsy tapaka amin'ny cellulite any an-trano. Ny fitsaboana dia mora kokoa noho ny mitsidika salon SPA, ary mitovy ny vokany. Raha tsy te handany fotoana sy ezaka ianao amin'ny fanomanana ny fiomanana voajanahary, mora kokoa ny mividy tsiro anti-cellulite amin'ny fametahana:
Demax sy ny hafa.
Ahoana ny fomba fametahana ny cellulite?
Ny teknika amin'ny fanatanterahana ny dingana dia toy ny singa manan-danja fa ny vaovao dia hiatrika izany na dia sambany aza. Ny fanangonana anti-cellulite dia mitaky ny fisian'ny fitaovana sy kojakoja manaraka:
sakafo na sarimihetsika kosmetika;
Anti-cellulite dia mameno ny trano amin'ny dingana:
Atoroy tsara ny faritra misy olana amin'ny toetr'andro mafana ary ento miaraka amin'ny soritra , ataovy marary. Izany dia manome fanadiovana lalina ny porofo mba hanatsarana ny fidirana ao anaty zavatra mavitrika, hampitombo bebe kokoa ny fatran'ny ra sy ny lalan'ny lymph.
Eo amin'ny habetsehana voaomana ary mihatra amin'ny anti-cellulite dia midika ho famenoana.
Amboary ny faritra misy sarimihetsika lipodystrophy, mihetsika avy any amin'ny farany ambany. Ny "mivadibadika" dia mila milamina, nefa tsy dia mafy loatra.
Mialà sasatra 15-40 minitra (miankina amin'ny karazana fanodikodinana sy fahatsapana) eo ambanin'ny bodofotsy.
Esory ilay sarimihetsika ary manadio ny vatana anti-cellulite. Hamototra faritra misy olana amin'ny crème.
Impiry aho no afaka manafoana ny cellulite?
Ao anatin 'ny fanenjehana ny endrika tena tsara, ny vehivavy sasany dia manararaotra ny fepetra voalaza, izay mety miteraka ny hoditra. Ny safidy tsara indrindra, matetika ny famolahana ny cellulite - in-2-3 isan-kerinandro amin'ny ankamaroany. Cosmetologists dia manoro hevitra momba ny famerenana ny fianarana maharitra 1 volana, aorian'izany dia tokony hiala sasatra mandritra ny 28-30 andro, ary avereno ny fitsaboana (raha ilaina).
Anti-cellulite fofona ao an-trano - fomba fanamboarana
Raha toa ny fisafidianana ny fisafidianana amin'ny alàlan'ny fitaovana enti-manavotra mba hanesorana ny "crust orange", dia maniry ny mipetraka mialoha amin'ny fitaovana avo lenta sy voajanahary. Tsy voatery mandany vola betsaka hanaovana fanafody amin'ny cellulite ao an-trano ianao - mifototra amin'ny vokatra sarobidy sy tsy misy vidiny:
Tondra-drano avy amin'ny cellulite
Ny votoatin'ny tsotra indrindra, fa tena ilaina sy mahomby indrindra. Ny tantely mifangaro avy amin'ny cellulite ao an-tokantrano dia ny fampiasana voankazo iray eo ambanin'ny sarimihetsika amin'ny endrika madio. Ny faharetan'ny fivoriana dia 25-30 minitra, mandritra ity fotoana ity dia mihamahavina sy mihalava ny hoditra, mihosotra amin'ny sakafo, ao amin'ny tavy marefo dia voajanahary ny metabolism.
Ny hafanana mangatsiaka avy amin'ny cellulite ao an-tokantrano dia azo ovana amin'ny fanampiana:
menaka iankinan-dango, voasary na mandarin;
amin'ny atody iray;
ronono maina na mena;
Olom-boasary, alika, jojoba na vary gazo;
Clay mivady avy amin'ny cellulite
Izany karazana fitsaboana izany dia malaza, satria manipika haingana dia haingana ny fahasalaman'ny hoditra, mampitombo ny feony sy ny elasticity. Ny tanimanga rehetra amin'ny fanafody amin'ny cellulite dia hanao, fa ny vokatra tsara sy haingana indrindra dia azo atao rehefa mampiasa manga. Ity vokatra voajanahary ity dia manankarena salohin'ny mineraly sy singa marindrano tsy fahita firy, izay manampy amin'ny fampivoarana ny fizotran'ny metabolika.
Ny fametahana amin'ny tanimanga manga avy amin'ny cellulite dia mora ny manomana - mila mampifangaro ny vovony amin'ny rano mitovy amin'ny habetsany ianao, manatontosa fanamiana miavaka amin'ny lanjan'ny tsiro. Manamafy ny fihetsika fanafody azo avy amin'ny fanafody amin'ny alalan'ny fanampiana solika ilaina (1-2 sotro isaky ny 100 g):
Kofehy vita amin'ny kafe avy amin'ny cellulite
Fa ny fitsaboana dia zava-dehibe ny mampiasa zava-pisotro voajanahary (voa voa). Azo atao amin'ny alalan'ny fampifangaroana kafe amin'ny rano mafana ny toeram-pofona matevina. Ny fampidiran-tsoan'ny mason-koditra dia manampy amin'ny fanamafisana ny fampidiran-dra, ny fihenan'ny metabolisma ary ny fanesorana ny lozam-pifamoivoizana. Tsy vitan'ny anti-cellulite fanafody ny kafeinina, manatsara ny famokarana elastin sy collagen, manamaivana ny hoditra, manatsara ny hafanany ary mampitombo ny elasticité. Misy ihany koa ny fomba mahomby sy mahomby kokoa.
Aromatika vita amin'ny cellulite ao an-trano
Kafe kafe - 100-120 g;
drano miharo - 50-80 ml;
menaka legioma (voankazo, oliva, mandro) - 35-50 ml;
ether (voankazo, grapefruit, menaka) - 2-3 sotro.
Omeo kafe amin'ny rano mangatsiaka ary miala 10 minitra.
Afangaro ny hafanana mangatsiatsiaka amin'ny solika sy ny menaka ilaina.
Avelao hamelomana kely ny fampangatsiahana, ampiasao araka ny torolalana.
Voangom-bokatra avy amin'ny cellulite
Ny dikan-teny mirehitra mandram-panafana, azo ekena raha tsy misy ny fanoherana, dia mety ho an'ireo tsy manana hoditra marefo. Ny fitsaboana amin'ny sela amin'ny sela-selulit ao an-trano dia manondro ny fomba fiasa mafana, mampihetsi-po tokoa ny lympha sy ny rà mandriaka, mampihena ny fizotran'ny metabolismika sy ny fanafoanana ny ranoka tafahoatra amin'ny tavy marefo.
Ny fikarakarana ilay fitotoana
paard of mustard - 200-220 g;
isa-menaka - 300-350 ml.
Atsangano ny solika ao anaty rano.
Ampiasao ny tavy voankazo miaraka amin'ny poitrin-tsinapy mba hahazoana dipoavatra matevina, toy ny crème.
Mampiasà rehefa 45 degre ny mari-pana amin'ny medy.
Manangom-bary avy amin'ny cellulite
Ny vokatra voafaritra dia matetika ampiasaina amin'ny ady amin'ny tsipika maromaro, satria manana ny fanimbana fananana. Ny cellulite mahomby ao an-trano amin'ny alàlan'ny vinaingitra dia manolotra ny fifangaroana amin'ny fitaovana hafa mavitrika, izay manatsara ny vokatra mampidi-doza ao an-toerana ary manampy amin'ny fanesorana ranon-dra moka amin'ny hoditra. Tena ilaina ny mahita ny vokatra voajanahary vita amin'ny paoma, fifandraisana eo amin'ny 7-9%.
drano mafana mahavelona - 100-120 ml;
ranomasina sira - 1,5-2 tsp.
Atsaharo ny sira ao anaty rano.
Apetaho vinaingitra vita amin'ny pèlerina ary mihozohozo tsara.
Manafosafo ny vahaolana amin'ny vahaolana ary manaparitaka ny sehatra misy azy ireo.
Top kasety fanesorana.
Algal mifindra avy amin'ny cellulite
Ny fitaovana fanondrahana ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny fanodinana dia heverina fa tena ilaina amin'ny fitsaboana ny hoditra. Io karazam-pihariana miaro amin'ny selaululita io dia mampisy tsiron-tsakafo misy mineraly mahadomelina sy vitamina, saline miavaka sy asidra amino. Ny fototry ny famolavolana dia azo vidiana ao amin'ny pharmacy. Ny alika mikronisina sy ny laminaria maina dia alevina.
Recipe amin'ny famenoana
alga maina - 150-200 g;
Ny rano mafana (na ny mari-pana ao amin'ny efitra, miankina amin'ny karazana fomba fiasa nofidiana) - 180-250 ml.
Esory ny fitaovam-pitsaboana ary manorata kely.
Apetaho amin'ny rano ny algà ary esory ny fitoeran-drano.
Soraty ny setroka 20-30 minitra mba hahavonto ny kora.
Ampiasao amin'ny endrika madio eo ambanin'ny horonantsary.
Hanamafy ny vokatr'io fanangonana algana io, raha ampiana fanafody manimba solifara anti-cellulite (1-2 sotro):
Frantsay manicure gel-varnish
Myostimulation ny vatana
Ny voan'ny varikose
Tato anaty tetezana
Fanaka fanakona ao an-trano
Ahoana no hampitomboana ny tratra ao an-trano?
Vaksina amin'ny hepatita B
Alec Baldwin no ho ray fanindroany: i Hilary vadiny dia miandry zaza iray
Photoshoot miaraka amin'ny lamba
Chanel Dresses 2014
Aretin'ny akorandriaka maimaim-poana - ora vitsivitsy mba hamonjena aina
Inona no soborozhdenie ary nahoana aho no tokony ho saro-kenatra?
Benefits of zebra maitso
Sukiyaki - resipe
Fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena ho an'ny vehivavy
Nahoana no maharitra ny vanim-potoana?
Akanjo mipoitra avy amin'ny kavina maina
Ny T-shirt lava lava ny vehivavy miaraka amin'ny fetra eo amin'ny sisiny
Park of Miniatures any Bakhchisaray
Ahoana ny fametrahana ny eyeletso?